यहोवाका साक्षीहरू धार्मिक गुट हो? | अक्सर सोधिने प्रश्नहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काबाइली काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डाँग्मे डिगोर डेनिश ताङ्काराना ताजिकी तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो बोस्नियन भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मिहे मेन्डे म्यानमार युक्रेनियन रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लाम्बा लिथुआनियन लो जर्मन वलिसियन वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
यहोवाका साक्षीहरू धार्मिक गुटको सदस्य हो?
होइन। यहोवाका साक्षीहरू कुनै गुटको सदस्य होइनन्‌। हामी येशूको उदाहरण पछ्याउन र उहाँको शिक्षाअनुसार जिउन सक्दो कोसिस गर्ने ख्रीष्टियनहरू हौं।
गुट भनेको के हो?
“गुट”-बारे मानिसैपिच्छे फरक-फरक धारणा पाइन्छ। तर अब हामी धेरैजसो मानिसहरूले राख्ने दुईवटा धारणा केलाऔं र त्यो कुरा हामीमा किन लागू हुँदैन भनेर विचार गरौं।
कसै-कसैको विचारमा गुट भनेको कुनै नयाँ धार्मिक समूह वा पहिलादेखि चलिआएको परम्परालाई अस्वीकार गर्ने धार्मिक समूह हो। यहोवाका साक्षीहरूले कुनै नयाँ धर्म सुरु गरेका होइनन्‌। बरु हामी बाइबलमा रेकर्ड गरिएका प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूले बसालेको नमुनाअनुसार परमेश्वरको उपासना गर्छौं। (२ तिमोथी ३:​१६, १७) कस्तो धार्मिक परम्परा स्वीकार्य छ र कस्तो परम्परा स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा धर्मशास्त्रले नै बताउँछ भनेर हामी विश्वस्त छौं।
गुट भनेको कुनै मान्छेको पछि लाग्ने खतरनाक धार्मिक समूह हो भनेर पनि कोही-कोही सोच्ने गर्छन्‌। यहोवाका साक्षीहरू कुनै मानिसलाई आफ्नो नेता ठान्दैनन्‌। बरु हामी येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको यो कुरा मनमा राख्छौं: “तिमीहरूका नेता एकै जना हुनुहुन्छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।”​—⁠मत्ती २३:⁠१०.
यहोवाका साक्षीहरू खतरनाक धार्मिक समूह होइनन्‌। तिनीहरूले मानेको धर्मले तिनीहरूका सदस्यहरूलाई र समाजमा अरूलाई पनि लाभ पुऱ्याएको छ। उदाहरणको लागि हामीले सिकाउने बाइबलको शिक्षाले थुप्रैलाई लागूपदार्थ र मद्यपान जस्ता कुलतहरू त्याग्न मदत गरेको छ। त्यसका साथै हामी संसारका विभिन्न ठाउँमा साक्षरता कक्षा पनि सञ्चालन गर्छौं। यसले गर्दा हजारौं मानिसहरूले लेखपढ गर्न सिकेका छन्‌। प्रकोपको बेला राहत दिने काममा पनि हामी निकै सक्रिय भएर भाग लिन्छौं। अरूमा राम्रो प्रभाव पार्न हामी सक्दो कोसिस गर्छौं। येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई यसै गर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो।​—⁠मत्ती ५:​१३-१६.
यहोवाका साक्षीहरू धार्मिक गुट हो?